दाङ : सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ। मुलखोलामा रहेको वडा कार्यायलयमा आगजनी गरिएको सल्यान प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीका कारण ३ नम्बर वडा कार्यालय प...
अज्ञात समूहद्वारा सल्यानमा वडा कार्यालयमा आगजनी, सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट
सल्यान – अज्ञात समूहले सल्यानकाे एक वडा कार्यालयमा आगजनी गरेको छ। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालयमा साेमबार राति आगजनी भएको हो । आगजनीबाट छत्रेश्वरी गाउँपालिका –३ मुलखोलामा रहे...
अज्ञात समूहबाट सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं. ३ को वडा कार्यालयमा आगजनी
अज्ञात समूहले सल्यानको एउटा वडा कार्यालयमा आगजनी गरेको छ । आगजनीबाट छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं. ३ को मुलखोलामा रहेको वडा कार्यालयका सबै सामान जलेर नष्ट भएका छन्। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रेस ...
सल्यान : छत्रेश्वरी गाउँपालिका–३ को कार्यालयमा अज्ञात समूहले आगजानी गरेको छ। सोमबार राति करिब २ बजे मुलखोलामा रहेको वडा कार्यालयमा आगजनी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लुहामले जनाएको छ। आगलागीबाट कार्...
वडा कार्यालयमा अज्ञात समुहद्वारा आगजनी
सल्यान । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा अज्ञात समुहले आगजनी गरेको छ । गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालयमा सोमबार राति करिब २ बजे आगलागी भएको हो । राति आगलागी भएको थाहा पाएपछि स्था...
वीरगञ्जमा भएको आगलागीबाट झण्डै दुई लाखको क्षति
वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २४ बहुअरी टोलमा मंगलबार बिहान आगलागी हुँदा करिब दुई लाख बराबरको क्षति भएको छ। आगलागीबाट अशोक पटेलको एक तले कच्ची घर जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट दुई लाख बराब...
अज्ञात समूहद्‍वारा सल्यानको एक वडा कार्यालयमा आगजनी
दाङ । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं- ३ को मुलखोलामा रहेको ३ नम्बर वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ । आगजनीबाट कार्यालय पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लुहामले जानक...